Nhau - Lyophilized nyowani korona nucleic acid reagent inogona kutakurwa mukamuri tembiricha, uye inogona kumira 47 ℃ yakanyanya tembiricha. Haisisina kukwana necheni inotonhora!
Rukudzo Uye Kufanirwa
Lyophilized nyowani korona nucleic acid reagent inogona kutakurwa panotonhora tembiricha, uye inogona kumira 47 ℃ yakanyanya tembiricha. Haisisina kukwana necheni inotonhora!
Denda repasi rose kudiwa kwemhiri kwemakungwa nucleic acid kuyedza inoputika
Zvinoenderana nenhamba dzeWHO, kusvika na4 pm musi waGunyana 16, 2020, nguva yeBeijing, huwandu hwezviitiko zvakasimbiswa zve COVID-19 pasirese hwapfuura 29.44 mamirioni uye vanopfuura 930,000 vakafa.
Takatarisana nedenda riri kuwedzera kukura kumhiri kwemakungwa, kudiwa kweECOVID-19 nucleic acid yekuona reagents yakakura. Chinese Chinese diagnostic reagent makambani ane hupfumi hwekiriniki mune yekushandisa chigadzirwa, uye panguva imwechete, ivo zvakare vane mukana wakakura mumutengo, zvichipa mukana wakakura wemusika wekudyidzana. Nekudaro, maitiro ekuburitsa makiti mhiri kwemakungwa akaomarara uye anotarisana nematambudziko mazhinji.
Iyo daro refu-refu rinotonhora cheni zvinhu uye dambudziko rekufambisa rinogona kuva chipinganidzo chikuru kukutengesa kunze kwenyika
Nekuvandudzwa kwemitemo yenyika yekutumira kunze kwenyika yezvinhu zvinorwisa denda, uye kusimudzira kwekuyerera kwevanhu uye zvekushandisa munyika dzakasiyana siyana, nguva yekufambisa kwema reagents yakawedzerwa uye pane kusava nechokwadi, uye nezvinetso zvechigadzirwa zvinokonzerwa nekutakurwa kwe reagents vave vakakurumbira. Kuona kuti tembiricha yakakwira kusvika pane zvakajairika uye mhando yechigadzirwa inokodzera, bhokisi re nucleic acid rekuona reagents asingasviki 50g uye mashoma makirogiramu echando yakaoma anogona kungogara kwemazuva maviri kana matatu chete.Dambudziko rekushomeka kwechando cheni zvinhu uye kutakura zvinogona kuva chipingaidzo chikuru kutengesa kunze kwenyika.
Yakadzika tembiricha zvinodiwa zvinokonzeresa zvakanyanya zvakanyanya mutengo wekufambisa Yakajairika nucleic acid yekuona reagents inoda kuchengetwa uye kutakurwa kutonhora cheni pa (-20 ± 5) ° C kuona kuti yavo biologically inoshanda zvinongedzo hazviite zvisiri izvo. Panyaya yeindasitiri tsika, iyo chaiyo huremu hwema reagents akaburitswa nemugadziri ari pasi pe10% yebhokisi (kana kure kuzasi kweiyi kukosha), uye huzhinji hwehuremu hunobva kune yakaoma ice, mapakeji echando, uye mabhokisi efuro, uye mutengo wekufambisa wakanyanya zvakanyanya.
Logistics inowedzerwa uye kutonhora cheni mhedzisiro inoderedzwa. Munguva dzakasarudzika, kutakura kwese kwema reagent kits kwakawedzera zvakanyanya nguva yekufamba. Nekuda kwekuona mhando yeakajairika emvura reagents, vatengesi kunze kwenyika vanowanzo fanirwa kugadzirira kutonhodza cheni kumisikidzwa iyo inoverengeka zvakapetwa zvakajairwa kutakura kwekumba. Kana tembiricha yekufambisa isingakwanise kuvimbiswa, mhando yezvigadzirwa zve regent zvinounzwa kumutengi zvichave hombe mubvunzo chiratidzo.
Haikwanisi gadziriso yemahara uye isina kukwana nzvimbo yekuchengetera. Mumamiriro ezvinhu akajairika, masangano ekurapa anowanzoita mapurojekiti ekuyedza mamorekuru uye haazogadzirire mafiriji akawandisa kana kuwedzera nzvimbo inochengetedza inotonhora. Munguva yedenda, hapana akawanda matura emasangano erudo anokwanisa kusvika -20 ° C kuchengetedza conditio
Yakazara-chikamu lyophilized reagents, ekisipoti nucleic acid reagents kuona zvakajairwa tembiricha kutakura
Kuti upfuure nepabhodhoro rekuti mamorekuru ekuongorora chirwere anofanirwa kuchengetwa uye kutakurwa pa -20 ° C, iyo "Novel coronavirus 2019-nCoV RT-PCR nucleic acid detection kit (lyophilized)" yakagadzirwa neShanghai Chuangkun Biotech Inc. Yakazara-chikamu chando Dhi reagents ine yakasimba yekupisa kugadzikana kune kutsungirira kupisa kwakanyanya kwe47 ° C kwemazuva makumi matanhatu, uye inogona kuchengetwa mukamuri tembiricha uye kutakurwa pane tembiricha yemukati. Izvi zvinobudirira kugadzirisa marwadzo ekuti kutakurwa kwemvura COVID-19 nucleic acid reagents inoda izere kutonhora cheni chengetedzo munguva yakapfuura, uye inoderedza kumanikidzwa padenda rekudzivirira uye kutonga.
Zvakanakira lyophilized nucleic asidhi reagents
Shanghai Chuangkun Biotech Inc.yakazara-chinoumba lyophilized COVID-19
nucleic acid yekuona reagent ine zvinotevera zvinotevera mukuwedzera
kune ayo maratidziro uye chiitiko ichienzaniswa neyemvura reagents:
Kuchengetedza uye kutakura mukamuri tembiricha:hazvidi kuti zvichengetwe pane yakaderera tembiricha isati yavhurwa, iri nyore kune ekurapa masangano pamatanho ese.
pedzisa nhanho imwe:Zvese zvinoriumba zvine lyophilized, hapana PCR reaction system yekugadzirira inodikanwa, uye inogona kushandiswa mushure mekumisazve, zvichirerutsa mashandiro ekuita.
Tsvaga matatu zvinangwa kamwechete:Chinangwa chinofukidza Novel coronavirus ORF1a / b geni uye N geni. Kuitira kudzikisira zvisirizvo, iyo IC bvunzo yeiyo yemukati rejenzi inowedzerwa kuchigadzirwa, icho chinogona kunyatsoongorora maitiro ese ekuyedza kubva mukuteedzera, kuburitsa kusvika pakuwedzeredza, uye kudzivirira zvakashata zvisiri izvo. Kupotsa kuongorora.
Parizvino, izere-chikamu chine lyophilized COVID-19 nucleic acid yekuona reagent yawana EU CE chitupa, uye vakabudirira vakapinda mu "chena runyorwa" rweChina Chamber of Commerce Yekunze uye Kunze Kwekunze kweInishuwarenzi yeUrapa munaGunyana 15, 2020, uye zvinoreva kuti kit yacho inobvumidzwa zviri pamutemo kuendeswa kunze kwenyika kutengesa kunze kwenyika kubatsira nyika yose kurwisa denda re COVID-19.
Shanghai Chuangkun Biotech Inc. yakanyorwa mune yazvino "Medical Insurance Chamber of Commerce's Rondedzero yeMedical Material Manufacturers Kuwana Kunze Kwekunze Certification kana Kunyoreswa" yakapihwa neChina Chamber of Commerce Yekunze uye Kunze kweMishonga neMishonga Hutano. Yakawana hunhu hwekunze uye inogona kutumira kunze kutsigira yepasi rose anti-denda.
Utachiona hauzivi miganho, uye kudzivirira uye kudzora denda kunoda kubatana kwekudyidzana kwenyika dzepasi rose. Iko kushanda kweiyo izere-chikamu kuomesa-kuomesa maitiro mune COVID-19 nucleic acid yekuona reagents ichabatsira mukudzivirira uye kutonga kwepasirese COVID-19 chirwere chapararira munzvimbo. Nekuda kwekutsigira nharaunda yepasi rose kuti vabatane pamwe chete kumatambudziko epasi rose ehutano pasi pechirwere cheCOVID-19, Shanghai Chuangkun Biotech Inc. inopa mhando yepamusoro "Novel coronavirus 2019-nCoV RT-PCR nucleic acid detection kit (lyophilized)" ku inobatsira kurwisa kwepasirese kurwisa denda reChinese simba!
Shanghai Chuangkun Bio yakazvipira kuunza nyowani mamorekuru ekuongorora matekinoroji kuti abatsire hutano hwevanhu vese uye kuve nechokwadi chekuchengetedza chikafu uye kubatsira nzanga.
Adress: Kamuri 802, Kuvaka 1, No. 69 Yuanfeng Road, Baoshan District, Shanghai, PR China
Runhare: + 86-21-60296318
CHKBiotech yakabudirira kugadzira detec ...
Furuwenza kana COVID-19? Yedu multiplex PCR ...
Lyophilized korona nyowani nucleic acid reagen ...